Cats - ezifuywayo, ophilayo side by side nabantu emhlabeni wonke. Lezi zilwane zinezikhathi ukuzimela. amakati Iningi bayojabulela ukuxhumana umninikhaya, kodwa buthule ukubekezelela ephuza wedwa. ezifuywayo tailed angadingi ukunakekelwa eziyinkimbinkimbi. Ubunzima obukhulu kunabo bonke abanikazi kubangela kokuzalela isizini cat sika. Indlela ukunqanda ikati, uma ukuthetha futhi kudinga ukuqaliswa isazela zalo eziyisisekelo?
Izici yokukhwelana in namakati
Ngo temdzabu kukhona amahlaya ezivamile mayelana amakati Mashi. Eqinisweni, isifiso sokuqhubeka emncintiswaneni ungakwazi ukubamba abameleli umndeni ikati kunoma iyiphi inyanga. Ngokuphawulekayo, njalo hormone enjalo okhuphuka ngamunye isilwane ngasinye. Into kuphela aphethe ungakwazi ungakhathazeki - weqa kokuzalela inkathi ngeke zisebenze. Phakathi kwama-hormone yokwanda amakati ukukhala noma Meow pitifully, kungase kube nezilwane ezenza ziba nolaka, kuyilapho abanye okudinga ukunakwa nothando kumnikazi. Okunye futhi ukubonakaliswa elibuhlungu isazela eziyisisekelo - isifiso ukuze iphawule indawo. Ngisho nezilwane lithambe kakhulu ngakwenzayo angase aqale ukuba "kutibonakalisa" kokuphelele efulethini. Ngiyavuma, lena akuyona limnandi. Sizozama kuhlu yonke yezindlela eziphumelela kakhulu futhi iphephile ukunqanda cat ngesikhathi kokuzalela.
Okufanele ukwenze uma umbhejazane ikati? Dedela!
Ngenxa ngaphezu inani lama-hormone egazini abesilisa phakathi nenkathi yokuzalela kukhona real-alpha besilisa. Kungani izilwane ukuthethisa? Lokhu kutshengisa ucingo izihlobo, futhi le nkulumo imizwelo nesichichimayo. Indlela ukunqanda ikati, ukuthi wayengafuni umemeze, bebodwa? abanikazi eziningi ezifuywayo tailed sipho nje ake ahambe for izilwane uhambo, sifisa inkululeko kanye adventure. Ngokuvamile lena indlela enhle uma uhlala emzini womzalwane kanye cat ngezikhathi kuqhubeka ekuzingeleni. Kodwa akumelwe sikhohlwe ukuthi isilwane angeke vele uye ekhaya. Ngisho e ethulile emaphandleni endlini ikati bangase bahlupheke isilwane sasendle esidliwayo noma imoto. Emadolobheni lamakhulu, ingabe ezingozini kaningi. Kasibili engamukeleki ukuxosha silwaneni emgwaqweni owake wabakhona khona. Lena ukucindezeleka enkulu isilwane.
Vumela isilwane sakho uthando
Abanikazi izilwane purebred ngabomvu isikhathi lapho isilwane zabo uzolunga ukuqhubeka esemncintiswaneni. Uma wayefisa, ungakwazi ukusesha ngisho ukhetho ngaphambi umakoti ikati uma unalo lozalo omuhle. Ungazama ukumema omunye umuntu kusukela nengangibajwayele abanikazi Kitties ikati lakhe njengoba nomkhwenyana, uma lungenayo rock, kodwa amahle. Nokho-ke akulona ikhambi, kodwa kuphela indlela lokukhumbula omunye ozithandayo kokuzalela isizini. Abanye abanikazi uncamela ukuqeqesha amakati isilwane "uthando" ukwenza into engakhulumi. Zama ukunikeza philanderer Tailed ithoyizi ezithambile noma izingubo zokulala. Nokho, le ndlela yokukhuluma ukulungiswa komsebenzi wocansi Ubuye nemibi. Ungamangali uma ngemva bavunyelwe "uthando" isilwane amathoyizi "uthando" Fur amajazi Omuny noma kusofa. Kodwa yini okufanele uyenze uma umbhejazane ikati, indlela ukunqanda isilwane?
Ngesikhathi sokuvukela kuka-hormone amakati kakhulu kahle kakhulu wathola ukunakwa abanikazi. Zama ngokuvamile ukudlala cat, thatha wamgona futhi stroked. Okubaluleke kakhulu - musa wamthethisa isilwane futhi ayibonisi ubudlova. Khumbula ukuthi isilwane sakho cishe ngokuphelele ukulawula yena. Indlela aziphatha ngayo - iyona nokubonakaliswa kwangaphandle kwe-overabundance hormone egazini lakhe. Ukunqanda ikati ekhaya akulula, uma njalo wayehlale engithethisa emamaki efulethini. Omunye namaqhinga ethandwa ukusiza ukuphazamisa isilwane isikhashana - ufafaza amanzi kancane. Uma iphendukele le ndlela, ikati ngempela buthule isikhashana, ngakho iyaqala nokuzilungisa. Futhi okwamanje amanzi alusebenti ngokumelene Elisengozini iconsi nje ukumemeza ukubuyiswa. Asihambisani le ndlela, nezilwane, ezifana nokwesaba amanzi wachela. Nokho, kusasele imizuzu embalwa ukuthula ngenxa ithuba aphethe ku ukucindezeleka ezengeziwe ukuze ikati.
kungakhathaliseki zasekhaya eziphephile opholile?
On the Luhambo zamakati kuya valerian wonke umuntu uyazi. Ngezinye izikhathi kuba ithuluzi nguMkhandlu njengendlela okulalisayo abangane bethu tailed. Uma ukunikeza cat enephunga valerian noma ukhotha kancane, ukuziphatha kwakhe ukushintsha ngempela futhi babe ezikhathini ezinzima. Kodwa lokhu akukhona indlela engcono kakhulu ukuthi ukunqanda ikati lapho uyahlanya. Valerian -, sine ephephile kubantu. Ukuze amakati njengoba Isidakamizwa ngempela kungakwenza umlutha kusukela isampula kuqala. Ukunika valerian Tailed is hhayi Kunconywa. Kuthiwani catnip? Eqinisweni, leli thuluzi enza umzimba ikati kanye valerian, kodwa ngandlela-thile buthaka. Lokhu kusho ukuthi Mint asifanele kakhulu ukulungiswa yokuziphatha yezilwane nenkathi yokukhwelana.
Tablets kuyasimangaza ukuzola pet umnikazi
Ngasiphi esitolo pet noma ekhemisi wezilwane ine ezahlukene umxhwele uphulukisa esikhethekile "ikati uthando". Amalungiselelo lolu hlobo zihlukaniswe ngezigaba ezimbili: sedatives futhi hormone. Okokuqala ephephile. Abanaso kuthinte ibhalansi hormone, kodwa ngesikhathi esifanayo usimamise isimiso sezinzwa esiyinhloko. Uma obakhathalelayo impilo isilwane, khetha imikhiqizo esekelwe isitshalo ezikhishwe zemvelo. Ukuze kube lula ukusetshenziswa kungatholakala ukudayiswa izidakamizwa e ezahlukene ifomu ukukhululwa: Drops, amaphilisi, elimbudumbudu wokwengeza ukondla.
Ukwelashwa nokuvikelwa amalungiselelo hormone
wezikhali Heavy ekulweni wemvelo eyisiqalo-hormone okuthiwa i amalungiselelo. izidakamizwa ezinjalo zingathengwa ngaphandle zooapteke kadokotela noma nomtholampilo wezilwane. Ithanda phambi ukusetshenziswa kwezinsiza inzima ngakho nodokotela. izidakamizwa kwama-hormone kunendima esiyingozi ngokwanele, kodwa lapho ezithathwe njalo ingozi izifo iyakhula. Ochwepheshe abaningi bathi izidakamizwa kulesi sigaba - akusiyo indlela engcono nodaba kanjani ukunqanda ikati. Into wukuthi amaphilisi ama-hormone amathonsi musa ngaso sonke isikhathi senze kahle futhi ngokushesha. Alternative - umjovo. Shots uyoqinisekisa ukubavala ikati, kodwa yingozi nakakhulu impilo isilwane sika. Kuyaphawuleka ukuthi izindleko imijovo siphakeme ngokwanele.
Castration: Izinzuzo nezingozi nebubi
I olukhulu kakhulu futhi ephumelelayo indlela ukunqanda ikati - ukwenza ukuhlinzwa. Zikhona ongakhetha izinyathelo ezimbili: ekususeni ngokuphelele testes noma Ligation cord spermatic. Bobabili zokungenelela eyenziwa ngaphansi izinzwa jikelele. Lezi imisebenzi kukhona elula, futhi uma eyayiqhutshwa udokotela abanolwazi, izingozi zimbalwa futhi ziyantula. Isikhathi yokutakula imfushane - nje kwamasonto ambalwa ngithole uyolikhohlwa ngeluhambo lwekuya wezilwane. In the ukungabikho contraindications ukuqhuba castration ngabanye kungaba kudala njengoba izinyanga 8. I plus eyinhloko ukusebenza - ngamaphesenti ayikhulu isiqinisekiso ukungabi khona ukuphinda. Uma unquma castration ungaqiniseka ukuthi ikati neze empilweni yami akazange alahlekelwe ikhanda yakhe ngenxa yothando. abanikazi yezilwane bathi ngokuvamile ngemva ezifuywayo ukusebenza udlule ezikhathini ezinzima. Nokho aphinde ahlinzwe yingozi. Khumbula ukuthi ngisho ngesikhathi ukusebenza kakhulu elula, ungalahlekelwa isilwane sakho. Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini okumele uyenze uma umbhejazane ikati. Indlela ukunqanda isilwane ekhaya - kuphuma kuwe. Ngezinye izikhathi nje ngokwanele ukuba ubuhlungu isikhathi eside. Uma lokhu kukhetha ungathandi ke, sebenzisa eyodwa yezindlela kuchaziwe ngenhla.
Makropody (inhlanzi): kwedivayisi nezinye izinhlanzi aquarium
On the rocks lapho isicaba empumulweni cat
Provolone (ushizi): incazelo kanye nezithombe
Izifundo ngenalithi noma ukufunda indlela ukukhilosha
Izinzuzo apple cider uviniga. I izakhiwo apple cider uviniga
Izigcawu kungasiza abazali bezingane